Madaxweyne Xasan oo qeyb galay Munaasabad qalin jabin ah oo ka dhacdey jaamacada SIMAD ee magaalada Muqdisho + Sawiro – idalenews.com
Madaxweyne Xasan oo qeyb galay Munaasabad qalin jabin ah oo ka dhacdey jaamacada SIMAD ee magaalada Muqdisho + Sawiro
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka qeyb galay Munaasabad qalin jebin ah Dufcadii 9aad Ardey dhameysatay Kulyadaha kala duwan ee Jaamacada SIMAD oo ka mid ah Jaamacadaha ugu waa weyn magaalada Muqdisho.
Munaasabada oo aheyd mid si heer sare ah loo soo qaban qaabiyay oo ka dhacday Hotelka City Palace ayaa waxaa shahaado lagu gudoonsiiyay ilaa 700 arday oo ka qalin jebisay Jaamacada, kuwaasoo muddo afar sano wax ka baranayay Jaamacada.
Ardayda qalin-jabineysay ayaa waxay ahaayeen dufcaddii sagaalaad, iyagoo dhameystay takhasusaaska kala ah Maaraynta ganacsiga (Business Adminstration) , Xisaabaadka (Accounting) iyo cilmiga computer ka (Information Technology).
Gudoomiyaha Jaamacada SIMAD C/raxmaan Odawaa oo hadal ka jeediyay Munaasabad ayaa sheegay in marxalad kala duwan ay soo martay, isagoo ugu hambalyeeyay Ardayda qalin jebisay oo isugu jiray Rag iyo Dumar in mudadii afarta sano ee ay Jaamacada wax ka baranayeen la kulmeen daruufo kala duwan.
Mr Odawaa ayaa sheegay in Jaamacada ay dhigtaan afar kun arday oo wax ka barta kulyadaha kala duwan ee Jaamacada, isla markaana ay Jaamacada dibada u dirtay Arday baraneysa Master-ka iyo PHD, isagoo cadeeyay mustaqbalka soo socda ay ka furi doonaan Xarun weyn oo Jaamacada deegaanka KM17 ee Ceelaha Biyaha Xarun ay wax ku baran karaan 10-kun arday, isla markaana jiif leh.
Gudoomiyaha Jaamacada ayaa sheegay in Ardayda qalin jebineysa ay nasiib u yeesheen in Munaasabada qalin jebinta uu ka soo qeyb galo Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa Aas-aasihii Jaamacada SIMAD, isla markaana ahaa Gudoomiyihii u horeeyay ee SIMAD sanadkii 1999 oo la aas aasay.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xirnaa dharka qalin jebinta oo uu wehliyay Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka C/kariin Xuseen Guuleed ayaa labadaba ahaa aas aasayaasha Jaamacada.
Khudbad uu Madaxweynaha uu ka jeediyay Munaasabada ayaa u badneyd mid dar daaran, dhiira gelin iyo hambalyo, waxaana uu dib u milicsanayay xusuustiisa macalinimo iyo mid Maamul, isagoo cadeeyay in Tacliintiisa ay Ahmiyad koowaad u aheyd inuu dalka Madax ka noqdo.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in rag ay ka mid yihiin Faarax C/qaadir oo ah Wasiiru dowladaha Madaxtooyada iyo shaqsiyaad kale ay ku dhiiradeen inay aas aasaan SIMAD sanadkii 6-dii November 1999, xilligaasoo uu sheegay in aan lagu dhiira karin in dalka la keeno macalimiin Ajnabi iyo waxbarashada oo aheyd mid hooseysay.
Waxaa uu sheegay in dowladiisa ay aas aas ugu dhigeyso waxbarashada, si mustaqbalka ay u soo baxaan jiil wax bartay oo aduunka cusub la jaan-qaada, isagoo ka sheegay Tacliinta iyo aqoonta heerka ay gaarsiisay dalal badan oo aan wax soo saar laheyn, haatana aduunka kaga jira kaalmaha hore dhanka horumarka iyo dhaqaalaha.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay horumarka dhanka wax barashadda, dowladdana wey ka go’antahay in ay taageerto waxbarashadda Soomaaliya, iyo tacliinta sare, dalalka hormaray waxey ku hor-mareen wax barashadda oo ay hor mariyeen, Arday Soomaaliyeed oo ka qalin jabineyso jaamacadaha dalka waxey tusaale u tahay jiil cusub oo Soomaali ah waxeyna kaalin mug leh ka qaadan doonan wax qabadka arrimaha bulshada iyo kan ganacsiga gaarka ah”ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.
Madaxweynaha ayaa kula dar daarmay Ardayda qalin jebisay inay sii wadaan aqoontooda, waxaana uu ugu baaqay inay ka shaqeeyaan sidii dalka u hormari lahaa, waxaana uu tibaaxay in dal walba uu hormariyo dadkiisa.
Madaxweynaha ayaa u mahad celiyay shirkado iyo hey’ado taageeray Jaamacada SIMAD intii uu Gudoomiyaha ka ahaa, isla markaana heerka ay gaartay Jaamacada ay qeyb lixaad leh ka qaateen sida uu yiri.
Ugu dambeyn Maamulka Jaamacada ayaa gudoonsiiyay Saddexda Arday ee ugu sareysa Ardayda qalin jebinta deeq waxbarasho Master lacag la’aan ah, iyadoo munaasabadan qalin jebinta ay ku soo aaday xilli Jaamacada ay dhowaan 14-sano jirsatay.
Gudaha Hoolka shirka Golaha Shacabka magaalada Muqdisho oo dayactir iyo qalabeyn lagu sameeyey